Wonke umuntu uyaphupha ka endlini enhle futhi zikhululekile. Futhi lokhu awasebenzi kuphela emakamelweni angaphakathi. Olungaphambili lwesonto isakhiwo nakho kubalulekile kakhulu. Eminyakeni yamuva, okuthandwa ulwelwesi yayo unikezwa itshe yemvelo, noma zasendle. Kuzocutshungulwa workshop on imishini ekhethekile, kuthatha yiluphi uhlobo. It kungashintsha umbala ngcono ezinye zezici zalo ngenxa kokudubula. Konke lokhu kuthinta kakhulu izindleko ukuthi abathengi kuyisici esibalulekile e kokuma. Yiqiniso, awufuni ukwenza olungaphambili lwesonto enhle, kodwa hhayi wonke umuntu ithuba lokunikeza imali eningi izinto zemvelo. Lesi simo siye saphoqeleka ochwepheshe ukusebenza ku ukudalwa rock ehlukile. Esikhathini esingeside esidlule, indaba akha ancintisane itshe yemvelo, yasungulwa.
Ngaleso sikhathi samanje, futhi ochwepheshe ukwakhiwa, futhi abathengi abavumelani ngokubona ukuthi kungcono ebhekene olungaphambili lwesonto isakhiwo - material yemvelo noma zamapulangwe phansi ngaphansi itshe. Impikiswano ngale ndaba bengayeki kuze kube yilolu suku.
Ukubukeka zamapulangwe ukuyosiza ekwakhiweni emakethe wamanje kakhulu ushintshe umqondo odongeni. Phela, manje-ke has material okuyinto ngempela ofanele izici le njongo futhi impela ezingabizi. Namuhla ukuchema phansi ngaphansi itshe - lokhu ingenye izinto ezidume kakhulu ulwelwesi.
Lokhu enamathela kudala inkohliso ephelele itshe. Ukuze yehlukaniswe material yemvelo Kungaba kuphela oza eduze isakhiwo. Abantu abaningi njalo ngonyaka ukhetha ebhekene ikhaya lakhe phansi Siding ngaphansi itshe. Kuyinto ishibhile kuka itshe yemvelo, kodwa ingena esikhundleni ngokuphelele kuye ngemuva, mhlawumbe, kuphela ngokuya ukusebenza.
Isokhethi ingxenye engezansi isakhiwo. Isikhathi esining impela ke echayeke umonakalo ahlukahlukene lokukhanda. Kuvame kakhulu singcoliswe nokuhlupheka ngenxa umswakama. Ground Siding ngaphansi itshe - impahla ngempela obukhulu. Uhlonze lwalo imayelana 3 mm - kuba kathathu kunakunoma analogu vinyl.
Imodeli udonga isikhunta, isibonelo, kusukela itshe. Njengoba lithatha isikhunta, ngayo nefunda ngayo isikhunta senziwa. Khona-ke, ngaphansi kwengcindezi ukukhiqiza ekubunjweni phansi zamapulangwe. Yenziwe izinto polymeric. Banezela fillers ekhethekile, okuyinto ukwandisa amandla, umbala fastness futhi ihlala isikhathi eside. Le nto has a ukumelana namanzi, ukubola, isikhutha ezimboziwe, hhayi bachayeka emathonyeni okungamhloniphi asemkhathini nolaka, olumelana uthuthumele. Yingakho phansi ngaphansi zamapulangwe itshe (okuyinto libuyekeza Rave kuphela) iyaduma ngakho ukwakhiwa.
Abaningi banesithakazelo ukubaluleka le nto enhle kakhulu. Ground zamapulangwe ngaphansi kwedwala, ogama intengo ingeqi ruble 500 per imitha square - okunye okukhulu ngoba ebhekene izakhiwo. Uma ukhetha lokhu okubalulekile iyingqayizivele ngempela, ekhaya lakho uyobheka yesimanje futhi stylish njalo.